Samsung kwupụtara ụbọchị mwepụta nke Galaxy M30s | Gam akporosis
Samsung kwupụtara ụbọchị mwepụta nke Galaxy M30s
Ná mmalite July, mbụ akụkọ na a variant nke Samsung Galaxy M30 bụ na mmepe. Ugbu a, karia mgbe ọ bụla, anyị nwere ike ikwenye na ihe ndị a bụ eziokwu. Companylọ ọrụ South Korea, n'eziokwu, enyelarị ụbọchị mmalite nke ngwaọrụ a echere ogologo oge, nke ga-abata dịka M30s Galaxy.
Ọbụghị naanị na ekwuputara na ekwentị ahụ dị na atụmatụ onye nrụpụta, kamakwa iji zụọ echiche nke ndị nwere mmasị na-azụ ahịa, ụfọdụ ozi metụtara ụfọdụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ. Otú ọ dị, Ihe anyị na-elekwasị anya ugbu a bụ ụbọchị a ga-ewepụta ya, nke dị ezigbo nso.
Ahịa mbu nke gha anata ebe etiti a gha abu India. Site na akwụkwọ mmado gọọmentị, Samsung gosipụtara na a ga-eme ka Galaxy M30s nwee ọrụ ebe ahụ na Septemba 18 a na-abịa, ụbọchị nke gafere naanị izu abụọ.
Anyị kwuburu banyere ya batrị ama a nwere ike ijide ya. Nke a ga - enwe ike ịnye ikike kacha mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a na nke ya n'ihi eziokwu ahụ bụ na ikike ya ga-abụ 6,000 mAh, na nke a gosipụtara na ọkwa mmado ha. Ọ ga-abụ n'ụzọ kwekọrọ na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa, yabụ na anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ma chee na ọ ga-etinye ma ọ dịkarịa ala awa anọ ejikọtara na chaja ma ọ bụ ihe yiri ya.
Dabere na ọzọ akwụkwọ, Ọ ga-enwekwa ihuenyo 6,4 nke anụ ọhịa (a kwadoro ya na ọ ga-abụ Super AMOLED)yanakwa na obere notch, obere bezels na mkpebi FullHD +. Ram na ROM ebe nchekwa nke a ga-enye ya, n'otu n'otu, ga-abụ 4 GB na 64 ma ọ bụ 128 GB. N'aka nke ya, ọ ga-etu ọnụ gam akporo dị n'okpuru Otu UI na onye na-agụ akara mkpịsị aka ya dị n'azụ ya.
Foto nke Samsung Galaxy M30s azụ mkpuchi dị ebe a ma ha na-ekpughe ihe pụrụ iche
N'ikpeazụ, ọ ga-enwe igwefoto nwere okpukpu atọ yana ihe mmetụta sensọ 8 megapixel. Nkọwa ndị ọzọ anyị ga-ama ma emechaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung kwupụtara ụbọchị mwepụta nke Galaxy M30s
Olee otú izipu foto na Telegram na-enweghị àgwà ọnwụ
Onye enyemaka Google nwekwara ike i scanomi ihu gị